Ururka Midowga Yurub oo war ka soo saaray wadahadallada u furmay Somalia iyo Somaliland | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Ururka Midowga Yurub oo war ka soo saaray wadahadallada u furmay Somalia iyo Somaliland
Midowga Yurub ayaa qoraal rasmi ah kasoo saaray wadahalada dowladda federaalka Soomaaliya iyo Somaliland uga furmay dalka Jabuuti.
Midowga Yurub ayaa soo dhaweeyay wadahalada 14-kii bishan ka bilaawday caasimadda dalka Jabuuti, waxayna ku tilmaameen tallaabo muhiim ah oo rajo gelineysa shacabka Soomaaliyeed iyo guud ahaan shacuubta ku nool Qaaradda Afrika.
“Waa qayb muhiim ah talbaada kalsooni dhisida ee dib u heshiisiinta laguna yareynayo kala aragti duwanaanshaha, laguna horumarinayo dhismaha nabadda, barwaaqada iyo hurumarka gobolka. Djibouti iyo Itoobiya waxay cayaareen door fir-fircoon oo uu ku qabsoomay wadahalka” ayaa lagu yiri qoraalka Midowga Yurub.
Midowga Yurub ayaa sheegay in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Muuse Biixi Cabdi ay labaduba ka go’an tahay sidii ay uga wada shaqeyn lahaayeen nabad geliyada iyo horumarinta.
Sidoo kale Midowga Yurub ayaa sheegay in habka kaliya ee lagu gaari karo barwaaqo iyo nabad waarta ay tahay inay wadahalaan labada dhinac, iyadoo laga fogaanayo wax kasta oo dhibaato u keeni kara wadahadallada haatan bilaawday.
Midowga Yurub ayaa ugu dambeyntii qoraalkaan ku sheegay inay goobjoog ka ahaan doonaan wadahalaada haatan socda, isla markaana ay diyaar la yihiin bixinta taageera kasta oo looga baahdo.
Ururka Midowga Yurub oo war ka soo saaray wadahadallada u furmay Somalia iyo Somaliland was last modified: June 17th, 2020 by Admin
Hindiya oo askar looga dilay dagaal ka dhacay xadka ay la leedahay Shiinaha
Wareysi Xasaasi Ah Foowzi Cabdi nuur waa Aqoonyahanada goblka baay ,Farmaajo